स्याम्पुले गराउँछ गर्भपतन ! – आफ्नो प्रेरक संसार
Bibas chetan — २० असार २०७५, बुधबार १४:२५0comment
असार २०-धेरै महिला तथा पुरुषमा नि:सन्तान समस्या देखिन्छ । अझ धेरै महिलाहरु गर्भपात समस्याबाट दु:खी छन् । किन हुन्छ महिलामा गर्भपात ? एक अध्ययनले महिलाले प्रयोग गर्ने साबुन तथा स्याम्पुले पनि गर्भपात हुने देखाएको छ । साबुन तथा स्याम्पुजस्ता ब्युटी प्रडक्ट्स, प्याकिंग गरिएका तयारी खानाहरुकासाथै अन्य रासायनिक उत्पादनहरुसँग लामो समयसम्म हेलमेल हुँदा त्यसले गर्भवती महिलाहरुमा गर्भपातको जोखिम बढाउने एक अनुसन्धानले देखाएको हो ।